Matte အနက်ရောင်ရေချိုးခန်း Faucet နေရာအနှံ့
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ / WOWOW Matte Black နှစ်လက်ပါကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း Faucet
WOWOW Matte Black နှစ်လက်ပါကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း Faucet
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.875ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 23 ဖောက်သည် ratings
Faucet Coating Coat သည်မျက်နှာပြင်ကိုချေးခြင်းနှင့်သံချေးခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
နစ်မြုပ်နေသောရေနှင့်ယိုစီးမှုပေးသောပိုက်သည်အစုအဝေးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ သင်၏သာယာဝပြောမှုအတွက်ပရီမီယံသံမဏိကုန်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်သေချာစေပါ
အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု - ရေအပူချိန်နှင့်ရေစီးဆင်းမှုကိုရိုးရှင်းစွာထိန်းချုပ်ရန်လက်ကိုင်နှစ်ချောင်း
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်း - တပ်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးပါ ၀ င်သည်။
2321300B installation ကိုညွှန်ကြားချက်
၃ အပေါက်တောင်ရှိကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း Faucet 3B-AMUS: ၆ 'အကြား - ၁၄' အကြားချိန်ညှိနိုင်သောအကွာအဝေး; အပေါက်အရွယ်အစား: 2321300 -6mm / 14 - 32 ''
Creative Quick Connect နည်းပညာ - ရေပိုက်ပြင်စရာမလိုဘဲသင်ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူသော၊ ပေါ့ပ်စစ်ထုတ်စက်တစ်ခုပါရှိသည်။ WOWOW FAUCET ဖြင့်တပ်ဆင်ခကိုလျှော့ချပါ
အနက်ရောင် ၂ လက်ကိုင်ရေချိုး Faucet - ထူးခြားသောအရောင်အဆင်းရှိသောမျက်နှာပြင်၊ ဂန္တ ၀ င်ရိုးရှင်းပြီးနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုမှအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ခြင်း၊ အငှားအိမ်၊ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်း၊ အိမ်သာ၊
ယိုစိမ့်မှုကင်းကင်းသန့်စင်သောရေကန်များ - မြင့်မားသောတံဆိပ်ခတ်ထားသော NSF ကြွေထည်မြေထည်နှင့်ရေချွေတာနိုင်သော ABS aerator သည်ယိုစိမ့်မှုနှင့်ခဲမရှိခြင်းကိုသေချာစေသည်။
၀ ယ်ယူသူအထောက်အပံ့များနှင့်သက်တမ်းကုန်အာမခံချက် - ရက်ပေါင်း ၉၀ အခမဲ့ပြန်လည်ပတ်ခွင့်နှင့်တစ်သက်တာအာမခံဖြင့်အကျုံးဝင်သည်။ ဆက်သွယ်ပါEMAIL❤service@wowowfaucet.com
SKU: 2321300B-AMUS Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ Tags: 8 လက်မ, Black က, ရေစစ်
12.1 x ကို 8.6 x ကို3လက်မ
J ကို *** ဇ2020-05-28
ငါ Delta နှင့် Phisher faucets များကိုစျေးကြီး။ ဝယ်ယူခဲ့သည်။ WOWOW ၏ထုတ်ကုန်သည်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည်ထက်ကျွန်ုပ်၏အရည်အသွေး၊ တပ်ဆင်မှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ငွေအတွက်တန်ဖိုးကိုမျှော်လင့်ခြင်းထက်ပိုသည်။ ကျွန်တော့်ရေချိုးခန်းနစ်မြုပ်တာနဲ့ကြည့်ရတာအံ့သြစရာပါပဲ။ ထုပ်ပိုးတောင်မှအဆင့်မြင့်တယ်။ ယိုစိမ့်မှုကိုကာကွယ်ရန်လက်ကိုင်နှင့် faucet အောက်ခြေတွင်ပါ ၀ င်သောအိုလက်စွပ်များကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့် flex ပူးတွဲမှုပိုက်သည်ယိုစိမ့်မှုမရှိဘဲ plug တစ်ခုနှင့်ကစားသည်။ ငါပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွေအများကြီးမလုပ်ကြပေမယ့်သင်နှင့်အတူငါမျှဝေမယ်လို့ထင်သောဤထုတ်ကုန်နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်။
T က *** t ကို2020-06-01
ငါမကြာသေးမီကငါ့ဟောင်းနွမ်းရေချိုးခန်းစုပ်နှင့်ဗီရိုဟောင်းနွမ်းပါးသောပေမယ့်အတန်ငယ် retro pedestal စုပ်နှင့်အစားထိုးပါဝင်သည်သောငါ့ရေချိုးခန်းပြန်လည်ပြုပြင်။ ဤသည်ကျယ်ပြန့်ကျယ်ပြန့် faucets လိုအပ်သည်။
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တွင်ရေချိုးခန်းအ ၀ တ်လျှော်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် faucets အသစ်များကိုချက်ချင်းလိုအပ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ကြီးများအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်၏ဒေသဆိုင်ရာ hardware store များကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ငါအံ့အားသင့်သွားပြီးစိတ်ပျက်မိတယ်၊ သူတို့မှာကျယ်ပြန့်တဲ့ရေချိုးခန်း faucets တွေရွေးချယ်ခွင့်ရှိရုံသာမကသူတို့အားလုံးဟာဒေါ်လာ ၁၀၀ နီးပါးလောက်ကုန်ကျတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒေသဆိုင်ရာအိမ်တိုးတက်မှုစတိုးဆိုင်များတွင်တွေ့ခဲ့ရသည်ထက်စျေးနှုန်းချိုသာသောဈေးဖြင့်ရွေးချယ်ရန် faucets အမြန်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ငါဒီ faucet စည်းဝေးပွဲအပေါ်အခြေချ, ငါပျော်ရွှင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါ faucets လှပသော brushed နီကယ် finish ကိုရှိသည်, ရေပေးဝေရေးချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သောစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ရေတိုရေပိုက်နှစ်ခုမှလွဲ။ တပ်ဆင်မှုအတွက်အားလုံးပါဝင်သည်။ ငါပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ငါ့ကိုကူညီမယ့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ရှိ။ , faucets ဟက်တာ။ ဒါပေမဲ့၊ ငါကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်မှာသေချာတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာစုဝေးဖို့အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်၊ ရုပ်ပြညွှန်ကြားချက်တွေကဖြောင့်ဖြောင့်တန်းပြီးနားလည်ရလွယ်ကူတယ်။ ကျွန်ုပ်တပ်ထားသောရေပိုက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ရေစုပ်အသစ်၏ပုံကိုတင်နေသည်။ ဒီထုတ်လုပ်မှုမှာအသုံးပြုတဲ့ကြေးနီ၊ အလှအပနဲ့အရေးကြီးတဲ့ငါထင်တာကတော့တပ်ဆင်ရတာလွယ်ကူပြီးဒီကျယ်ပြန့်တဲ့ရေချိုးခန်း faucet တပ်ဆင်မှုဟာအလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
ဒီ faucet တပ်ဆင်ခြင်းရဲ့နောက်တစ်ခုကရေစုပ်ဖို့အတွက် "အဆို့" ပါ။ ၎င်းကိုသူကအပေါ်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်ပိတ်, ထိုသို့နောက်တဖန်အပေါ်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်ဖွင့်လှစ်။ ငါဒီဟာအဟောင်းကိုအဆို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုလို့ယုံကြည်တယ်။ အဲဒါကသင်ကလီဗာကိုဖွင့်ပြီးပိတ်ဖို့လိုတယ်။ ငါချွင်းချက်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ချွတ်ယွင်းမှုမရှိတဲ့အဟောင်းကိုတစ်ခါမှမရဖူးဘူး။ တကယ်တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာလုံးဝကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်။ ငါအများကြီးတိုးတက်လာသောအဆို့ရှိသည်ရှိသည်ဖို့တကယ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ၎င်းသည်အချို့သူများအတွက်အနည်းငယ်သေးငယ်ပြီးတိုးတက်မှုမရှိဟုထင်ရနိုင်သော်လည်းအဆို့ဟောင်း၏ပြproblemsနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြသောငါတို့အတွက်၎င်းသည်ကြိုဆိုသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
: D *** t ကို2020-06-03
စျေးနှုန်းအတွက်အရည်အသွေးကောင်း! အဆိုပါ finish ကိုအကြီးအကြည့်နှင့် faucet ပြုလုပ်သင့်တယ်တူသောအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုသည်များသောအားဖြင့် pop up drain သည်ကျွန်ုပ်ရေနစ်မြုပ်မှုအတွက်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ (တိုလွန်းသည်) ငါရောင်းသူကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီး 10 မိနစ်အတွင်းသူတို့ကပြန်လည်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုထွက်လာခဲ့သည် သူတို့ကပိုရှည်သောယိုစီးမှုအသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး faucet ၏အပြီးသတ် / ဒီဇိုင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထို့နောက်အသစ်ကို ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုငွေပြန်အမ်းခဲ့သည်။ ယိုစီး။
J ကို *** ဋ2020-06-07
ဤရွေ့ကားငါဝယ်ယူရှိသည်အကောင်းဆုံး faucets အချို့, အထူးသဖြင့်ဒီစျေးနှုန်းမှာ။ သူတို့သည်လှပပြီးစတိုင်ကျလှပပြီးအသစ်စက်စက်ပြုပြင်ထားသောရေချိုးခန်းတွင်ကြည့်ကောင်းရုံသာဖြစ်သည်။ ငါအပေါ်ထပ်ပုံစံပြန်လုပ်ရန်ပိုမိုစျေးကြီးသော set ကိုသုံးခဲ့ပြီးဒီတစ်ခုကအများကြီးပိုကောင်းသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူက Moen (သို့) မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေလိုပဲအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၅၀% ကျော်လောက်ပဲ။ ငါဒီထုတ်ကုန်ကိုအထူးအကြံပြုလိုတယ်
ငါ *** r2020-06-11
ဒီ faucet ကအံ့သြစရာပါ။ ပြုပြင်မွမ်းမံနေစဉ်ကျွန်ုပ်ရေချိုးခန်းနှင့်မီးဖိုချောင်အတွက် CHROME တွင်မတူညီသော faucets အချို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ပေးရသည့်အရာသည်သင်ရရှိသောအရာသည်မှန်ကန်စွာကိုင်စွဲထားသော်လည်းဤကိစ္စတွင်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်ယင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်၏ရေချိုးခန်းတွင်နေ့စဉ် ၆ လကျော်ကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီးဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးလ်တာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ယိုစိမ့်မှု၊ လက်တွန်းလှည်းများ၊ ရေဖိအားများနှင့် faucets များနှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားမကျေနပ်ချက်များမပါ ၀ င်ပါ။ ဒီ faucet နှင့်အတူထိပ်ပေါ်မှာချယ်ရီကရေအစက်အပြောက်မပြပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏အခြား faucets များအားလုံးကိုအသစ်ကြည့်နေရန်ရက်အနည်းငယ်တိုင်းသန့်ရှင်းရမည်။ ကျွန်တော်ဟာသီတင်းနှစ်ပတ်ခွဲကြာအောင်မရှင်းဘဲမနုပ်ဘဲမရှင်းနိုင်ဘဲသင်ပင်မပြောနိုင်ပါ။ ငါဒီ faucets နှင့်အတူချစ်ကြပါ၏ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏စျေးနှုန်းအရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ Price Pfister faucet နှင့်တန်းတူဖြစ်သည်၊ သို့သော်သူတို့သည်တစ်ချိန်လုံးကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော faucet ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးက *** ဇ2020-06-13
ငါဒီတစ်ခုနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့အဆုံးရေချိုးခန်း faucet အစားထိုး။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချိတ်ဆက်ထားသောရေပိုက်များကတပ်ဆင်ရန်လေလေဖြစ်ပြီးတည်ဆောက်ပုံ၏အရည်အသွေးနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်းနွမ်းပုံထက်မည်မျှပိုကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်သဘောကျမိသည်။ ငါအရင်ကမကြားဖူးခဲ့တဲ့အမှတ်တံဆိပ်တခုကိုအခွင့်အရေးယူနေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့သေတ္တာဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်မှာငါပေးဆပ်ရမယ့်အရာတွေရဲ့ထက်ဝက်လောက်လောက်ကဒီဟာမယုံနိုင်စရာတန်ဖိုးပဲ။
B က *** င2020-06-16
ကျွန်ုပ်သည်ငှားရမ်းနေသူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏သခင်၌မကောင်းသော faucets နှစ်ခုကိုအစားထိုးရန်တစ်တန်မျှမလိုချင်ခဲ့ပါ။ ငါတကယ်ကဤနှင့်အတူကျေနပ်ထက်ပိုဖြစ်၏။ အရည်အသွေးမြင့်ထိပ်တန်းထစ်နှင့်တပ်ဆင်ရန်စူပါရိုးရှင်းပါသည်။ အသစ်ကဲ့သို့တပ်ဆင်ခြင်းထက်ဟောင်းနွမ်းသောအရာများကိုဖယ်ရှားရန် ပို၍ ကြာမြင့်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်တန်ဖိုးကိုရှာနေစဉ်တွင်အရည်အသွေးကျသည်။ အချိန်ကပြောလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်အထိဤငွေများသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။
K သည် *** ခ2020-06-18
ငါများသောအားဖြင့်ငါတို့ Facility မှာ Big Name Brand Faucets ကိုသာသုံးသည်။ ဒါပေမယ့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုမြင်ပြီးနောက်ငါတကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
faucet ၏အရည်အသွေးနှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူမှုအပေါ်အလွန်သဘောကျသည်။ ယူနစ်သည်အစိုင်အခဲ ဖြစ်၍ ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားပြီးဆက်သွယ်မှုများကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
R ကို *** w2020-06-20
ဒီ faucet ကိုချစ် !! အလွန်ကြီးစွာသောစျေးနှုန်းအဘို့အကြီးမြတ်အရည်အသွေး။ Lowe's တွင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတူညီသော faucet တစ်ခုမှာဒေါ်လာ ၁၁၉ ဖြစ်သည်။ ကျိန်းသေအကြံပြု!
: D *** မီတာ2020-06-24
အသေးစားရေချိုးခန်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်နေသည့်အခါ faucet အသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေခဲ့ရသည်။ ဒီအစုံ၏ချောချောမွေ့မွေ့အသွင်အပြင်ကိုချစ်၏။ ငါအဲဒါကို MATTE BLACK အဖြစ် ၀ ယ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့အနည်းငယ်ပိုပြီးအရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်ကိုမျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ဒါကတော်တော်လေးလှတယ်။ ကျန်ရှိနေသေးသောရေချိုးခန်းအတွင်းရှိ hardware သည်ထိုမီးခိုးရောင်အရောင်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်သည်။ သို့သော်ဤအရာနှင့်ငါအသက်ရှင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ remodeler ကတပ်ဆင်ရန်မည်မျှလွယ်ကူကြောင်းမှတ်ချက်ချသည်။ faucet ကလုပ်သင့်သည်အတိုင်းအလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်ပြီးဈေးသည်မှန်သည်။
N ကို *** ဎ2020-06-26
ဒီ faucets တွေကိုသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာပါ။ ၎င်းတို့မှတောင်တစ်ခုစီတွင်ရေများမစီးဆင်းစေရန်တားဆီးထားသောတံဆိပ်ခတ်များသို့မဟုတ် gaskets များရှိသည်။ တပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်သည်။ ပစ္စည်းများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြောင့်သူတို့သည်ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ရုံသာမကသံချေးမသွားပါ။
ကျွန်ုပ်၏ယခင် faucets များကို local hardware store မှပိုမိုမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်အတွက် ၀ ယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့သည် ၃ နှစ်မပြည့်သောကာလ။ ငါသူတို့ကိုချွတ်ဖို့သွားတဲ့အခါငါအခွံမာသီးဟာအဆို့ရှင်ကိုသံချေးထိုးပြီးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရတယ်။ ကြည့်ရသည်မှာအဆို့ရှင်၏အောက်ခြေပတ်လည်တွင်တံဆိပ်ခတ်ကောင်းတစ်ခုမဖြစ်၊ အခွံမာကိုလည်းသံချေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကက်ဘိနက်အတွင်း၌ရှိပြီးသွားရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ယင်းသည်နာရီများစွာကြာခဲ့သည်။
အီး *** င2020-06-28
ဒီ faucet ပြီးပြည့်စုံသော! ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုကြည့်ပြီးတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ လက်ဗွေများမရှိပါ။ ကျနော်တို့ပတ်ပတ်လည်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပေမယ့် $ 100 မဖြုန်းချင်ကြဘူး, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအပေါ်အခွင့်အလမ်းကိုယူ။ ငါတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ မင်းစိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။
တစ်ဦးက *** ဃ2020-06-30
ငါသည်ငါ့ဟောင်းနွမ်းခေတ်ဟောင်း faucet အစားထိုး။ ငါအရမ်းကျေနပ်မိပါတယ် ဒါဟာအကြီးအကြည့်နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ် !! ငါအခြားအ faucets ဟောင်းအစားထိုးနှစ်ခုထက်ပိုသောဝယ်ယူရန်စီစဉ်ထားသည်။
တစ်ဦးက *** ဋ2020-07-01
ဒီကုန်ကျစရိတ်ထက်နှစ်ဆကုန်ကျတဲ့ရေချိုးခန်း faucets ငါးလုံးကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးနေပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအလွန်ကောင်းစွာပြုလုပ်ထားသည်။ ငါပြောရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယိုစီးမှုသည်ပိုက်ချည်များတွင်အသုံးပြုရန်ပိုက်ချည်တံဆိပ်ခတ်သူအချို့ကို ၀ ယ်ရန်ညွှန်ကြားချက်များဖြစ်သည်။ ရေနုတ်မြောင်းပိုက်သည်လျှံသောအပေါက်တစ်ခုနှင့်အတူနစ်မြုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသဖြင့်အောက်ဘက်ရှိအခွံမာနှင့် gasket ကြားရှိအဆို့တွင်အောက်ဘက်ရှိအပေါက်များရှိသည်။ အဆိုပါချည်အလွန်သင်တန်းဖြစ်ကြပြီးငါစစ်ထုတ်သည့်အခါရေသည်လျှံတွင်းထဲကစီးနှင့်ချည်မှတဆင့်နှင့်ယိုစီးမှုပိုက်ကိုကိုင်ထားသည့်အခွံမာသီးထဲကယိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတာငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ချည် sealer နှင့်အတူအလွယ်တကူဆုံး။ ရေယိုစီးမှုသည်နစ်မြုပ်မှု၏ထိပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ရေပိုက်ပြင်စက်များသုံးရန်သင့်အားညွှန်ကြားထားသော်လည်း၎င်းသည်ယိုစိမ့်မှု၏ရင်းမြစ်မဟုတ်ပါ။ ချည် sealer ရယူပါ။ IMO, သင်စျေးနှုန်းမှာဒီ faucet မှားမသွားနိုင်ပါ!
L ကို *** r2020-07-06
ဒီအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ faucet အတွက်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အပြင် install လုပ်ဖို့လည်းအရမ်းကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ Pop up drain သည်ထူးခြားသည်။ ငါဒီ faucet နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ရန်မျှော်လင့်ထား။ ထိုကဲ့သို့သော faucet ကြီးမားသောအုတ်နှင့်မော်တာမှဤကဲ့သို့သောနှိုင်းယှဉ်သော faucet သည်ဤ faucet ထက် ၃ ဆကုန်ကျသည်။ ငါအရမ်းအကြံပြုလိုပါတယ်နှင့်ကျိန်းသေနောက်တဖန်မဝယ်လိမ့်မယ်။
, G *** ဃ2020-07-09
ငါ 25 နှစ်အရွယ် faucet အစားထိုးဒီဝယ်လိုက်တယ်။ ငါကဲ့သို့သောအတွေ့အကြုံမရှိသေးသော DIY တပ်ဆင်သူအတွက်ပင်လေပြင်းတိုက်သည်။ တစ်ခုတည်းသောခက်ခဲသောအရာမှာသံချေးအဟောင်းကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့ပေးထားသောလွယ်ကူသော connectors များသည်အထူးသဖြင့်နာကျင်မှုမရှိသောကိစ္စဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောတိုင်ကြားချက်မှာ faucet ကိုအစားထိုးလိုက်သော faucet ဟောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အချောထုတ်ကုန်သို့သော်ချောမွေ့နှင့်ပိုပြီးကြော့ကြည့်ရှုသည်။
မရှိသလောက်သုံးသောရေချိုးကန်ထဲ၌ထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းတွင်ဘဝအတွေ့အကြုံမရှိသော်လည်းအထုပ်သည်သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးနှင့်ပြည့်စုံပြီးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အဆို့သည်အဆို့ကိုမြှင့်တင်ရန်ပုံမှန်လှံတံထက်ကိရိယာကိုပိတ်ရန်တွန်းသည်။ ငါကဒါကိုသဘောမကျပေမယ့်တကယ်တော့အဲဒါဟာပိုပြီးရိုးရှင်းပြီး၎င်းမှာ strainer ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကယိုစီးကျနေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုချလိုက်ရင်သင်အဆို့တစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြန်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အဆို့ဖွင့် / ပိတ်ရန်လှံတံမရှိခြင်း၏ဆိုးကျိုးထက်ပိုကောင်းသည်။
B က *** ။2020-07-24
ဒီ faucet ကငါတို့ရေချိုးခန်းထဲမှာကြည့်ကောင်းပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။ မှတ်သားရမည့်အချက်တစ်ခုနှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ တပ်ဆင်သည့်အခါ faucet နှင့်အတူပါလာသောအမြန်ချိတ်ဆက်ရေပိုက်ခိုင်မြဲစွာထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုငါအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်ရေကိုဖွင့်လိုက်ပြီးရေပိုက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပြတ်တောက်သွားတယ်။ လွယ်ကူသောပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရေပိုက်များချိတ်ဆက်သောအခါခိုင်မြဲစွာတွန်းရန်သတိရပါ။
ငါ faucet အပေါ် aerator နှင့်အတူသေးငယ်တဲ့ပြissueနာရှိခဲ့ပါတယ်နှင့် WOWOW ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအလွန်လျင်မြန်ပြီးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂရိတ်ကုမ္ပဏီ, ကျိန်းသေဒီ faucet အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
H ကို *** s ကို2020-07-26
ဒီဟာကိုရပြီးတော့အဲဒါကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်။ ထုပ်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအလွန်ကောင်းသောထုပ်ပိုးမှုနှင့်ထင်းရူးတန်ဖိုးအလွန်ရှိသည်။ ငါဝယ်ယူခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်လုပ်မဟုတ်ဘဲမတိုင်မီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများစွာကိုဖတ်ပါ။ အခုထိတော့ယိုစိမ့်မှုမရှိပါဘူး။ တစ်ခုခုပြောင်းသွားရင်ငါပြန်လည်သုံးသပ်မယ်။ Plus အား, အဖြစ်မကြာမီထုတ်ကုန်တယ်အဖြစ်ငါရောင်းသူထံမှအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ပြanyနာတစ်ခုခုရှိရင်ငါသူတို့ကိုငါတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သင့်တယ်။ ငါယခုအချိန်အထိအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆိုပါတယ်အဖြစ်။ ၎င်းသည်ငွေအတွက်အလွန်ကောင်းသည့်တန်ဖိုးဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
S က *** က c2020-07-28
ကျနော်တို့ကဒီ faucet ကိုချစ်။ အဆိုပါခလုတ်ကိုယိုစီးမှု plug ကိုစူပါကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ကိုင်များသည်ချောချောမွေ့မွေ့လှည့်ပြီးရေသည်စီးဆင်းနေသည်။ ငါလုပ်နေတဲ့စုစုပေါင်းရေချိုးခန်းပုံစံသစ်အတွက်အဲဒါကို ၀ ယ်လိုက်တယ်၊ ဒါကိုအွန်လိုင်းမှာအမှန်တကယ်မမြင်တော့ဘဲဝယ်ဖို့စိတ်ပူခဲ့တယ်။ ဒါဟာငါ့မျှော်လင့်ချက်များထက်သာလွန်ခဲ့သည် ဤ ၀ ယ်ယူမှုအတွက်ကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတွေ့အကြုံများစွာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
K သည် *** s ကို2020-08-05
faucets ကြင်ချောနှင့်ကောင်းစွာထုပ်ပိုးနေကြသည်။ အဆိုပါ spigot စုပ်အင်တုံကျော်ကောင်းသောဗဟိုပြုနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ရေပိုက်များနှင့် spigot အောက်ရှိ gasketing နှင့် fittings ရေရေကျူးကျော်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကောင်းစွာထင်နေကြသည်။ အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားပုံရသည်။ Pop up drain နှင့် tailpiece တို့သည်အစားထိုးထားသည့်အရာကဲ့သို့မခိုင်မာသော်လည်းလုံလောက်သည်။ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရန်မှာမခက်ခဲပါ။ faucet တစ်ခုစီနှင့် spigot တစ်ခုစီသည်ထုပ်ပိုးခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ သို့မှသာအကူးအပြောင်းတွင်ခြစ်ရာများမပေါ်ပါ။
ကို C *** ဎ2020-08-11
တကယ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းက Home Depot မှာရှိပြီးငါကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကို WOWOW မှာဒေါ်လာ ၂၀ နဲနဲနဲမရှာနိုင်ဘူး။ သွတ်သွင်းရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်ရေအနည်းငယ်ကိုစုပ်ယူပြီး၎င်းသည်အလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းဟာအလွန်အစိုင်အခဲခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီရေစီးမြောင်းထဲကို ၀ င်လာတဲ့ရေနုတ်မြောင်းကိုငါတကယ်သဘောကျတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အခြားရေချိုးခန်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်သောအခါအခြားတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
ယိုစိမ့်သောငါ၏လက်ရှိ faucet အစားထိုးဒီဝယ်ယူခဲ့သည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဒီသစ်ကိုတပ်ဆင်ရန်မိနစ် ၂၀ ခန့်အချိန်ယူရပြီးအဟောင်းကိုထုတ်ယူရန်နာရီဝက်ခန့်အချိန်ယူခဲ့ရသည်။ Pop up drain လည်းပါ ၀ င်ပြီးကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကြည့်ကောင်းတယ် သူတို့ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာမသေချာပေမဲ့အခု ၀ ယ်တာကို ၀ မ်းသာပါတယ်။
WOWOW ရေချိုးခန်း ၀ ယ်ယူသူသည် Faucet ၄ လက်မစင်တာဆီ ...